Indlela yokuphatha iCloud yogcino | IPhone iindaba
Phakamisa isandla sakho ongalahlekanga iifoto zibalulekileyo okanye imiyalezo kuba kuye kwafuneka ukuba babuyisele ngaphandle kokukwazi ukuyigcina ngaphambili, nokuba kungenxa yokulibala, okanye ngenxa yokuba i-iTunes ayikuvumeli ukuba ugcine ukhuphelo lolondolozo kunye nokusilela kwayo okudumileyo. Kuba iApple iphumeze inkonzo yayo ye-iCloud, i-backups ezenzekelayo iyamangalisa, ezinye izinto zinokuthi / kufuneka ziphuculwe, kodwa oko yonke imihla, xa uqhagamshela i-iPad yakho okanye i-iPhone kwitshaja kwaye uqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-WiFi, ugcino lwenziwa ngokuzenzekelayo Ikuhlangula kwisimo esingaphezulu kwesinye. Ugcino lwenziwe kwiakhawunti yakho ye-iCloud, kwaye ukuba unezixhobo ezininzi ezineakhawunti efanayo ye-iCloud, uya kuba ne-backups ezininzi kwiakhawunti efanayo, kunye ne-5GB yendawo yasimahla esinokuba nayo imfutshane kakhulu. Singakulawula njani ngokufanelekileyo eso sithuba? Yiloo nto esiza kuchaza ngayo kweli nqaku.
Ukuba sifikelela kuseto> iCloud siya kuba noqwalaselo lweakhawunti yethu kweso sixhobo. Apha sinokucwangcisa oko sifuna ukungqamaniswa ne-iCloud kunye noko kungenjalo. Kodwa siza kugxila kwii-backups, esiza kungena kuyo kwicandelo «Ukugcina nokukopa»
Kwesi sikrini sinokuvula okanye singasebenzi kwinkonzo yogcino kwi-iCloud. Kwimeko yethu iyasebenza, kwaye into esiza kuyenza kukulawula kakuhle i-5GB esiyinikwa ngu-Apple simahla. Cofa ku «Lawula ugcino».
Nantsi into enomdla ngenene iqala, kwelinye icala sinazo ikopi yogcino lwazo zonke izixhobo ezisebenzisa iakhawunti yethu, kwimeko yam i-iPad Mini kunye ne-iPhone 5, kwelinye, amaxwebhu kunye nedatha egcinwe kwi-iCloud, nokuba zivela kwizicelo ezisebenzisa le nkonzo (i-KeyNote, amaPhepha ...) okanye imidlalo egcina imidlalo kwi-iCloud ukungqamanisa phakathi kwezixhobo, ezinje i-GTA yeVice City entle. Ukuba sicofa nakweyiphi na kwezi zicelo, sinokucima into esicinga ukuba asisayidingi, uxwebhu oluthile okanye umdlalo esingasafuni ukuwugcina. Oku kuphela kunokusivulela indawo, kodwa into ebalulekileyo kwizixhobo ezingaphezulu.
Unokuba ubukhe wanayo i-iPhone 4 ongasenayo ngaphambili, kwaye ugcine i-backups kwi-iCloud, engenaxabiso ngokuthatha indawo enexabiso. Ukucima le kopi kulula njengokucofa isixhobo ekuthethwa ngaso kwaye ucofe ku «Cima ikopi». Okanye umzekelo kwimeko yam, ikopi yam ye-iPad Mini, ihlala kwi-1,8GB, indawo ebonakalayo. I-reel yinxalenye ethatha kakhulu, kodwa oko kubalulekile kum kwaye ndifuna ukuba igcinwe, kwaye kukho malunga ne-500MB engaphezulu ethatha idatha kwizicelo ezingandiniki mdla. Ndingazenza zingasebenzi kwaye idatha yakho ayizukugcinwa kwikopi elandelayo, ke kwikopi elandelayo uya kube usikhulule sonke eso sithuba.
Ngale ndlela sinokufumana okuninzi kwi-5GB ye-iCloud, kwaye unedatha ebalulekileyo exhaswe kakuhle. Khumbula ukuba ngokungafaniyo ne-iTunes, onokuyifumana kwakhona ikopi naphi na xa ufuna, ikopi ye-iCloud inokufunyanwa kuphela emva kokubuyiselwa okupheleleyo, yenye yezinto endibhekisa kuzo xa bendisithi yinkonzo enokuphuculwa. . Ukuba iApple ivumele ukuba ikopi iphinde ifunyanwe nangaliphi na ixesha, iya kuba ilungile.
Funda nzulu -I-Grand Theft Auto: iSekela lesiXeko se-iOS, buyela emva kwii-80s
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iCloud » Indlela yokusingatha iCloud yogcino
Iya kuba ilungile ukuba iyavuma, njengoko usitsho, ukufumana kwakhona ikopi nanini na xa ufuna, kunye NOKUBALULEKILEYO kum, ukuze ndikwazi ukubuyisa kuphela imixholo enomdla: idatha evela kwisicelo X, idatha evela kwisicelo Y, Idatha yeposi ...
Yiza, iMiniMachine Mini.
Ingxaki ngokubuyiselwa okupheleleyo kukuba ngamanye amaxesha ininzi i-junk esuswe kakuhle. Ukuba ukubuyisela "okukhethiweyo" kunokwenziwa, inkonzo iyakulunga.
Ndiyathemba ukuba iza kungekudala
Kuthunyelwe ngo-Sparrow (http://www.sparrowmailapp.com/?sig)
NgoLwesine, nge-31 kaJanuwari, 2013 ngo-12: 37 emva kwemini, uDisqus wabhala:
Kuyenzeka kum ndicinga ukuba ngokufanayo ne-cmardonesd @ gmail, ndenze ugcino kwi-iTunes, emva koko ndayibuyisela ipad, ngoku ndizama ukubuyisela ukhuphelo kodwa ndinento ebendinayo ngaphambili, kuphela iifoto, kwaye ndinayo ndilahlekelwe zizinto ezininzi ezibalulekileyo, ubabalo kukuba ndingena kwi-iCloud kwaye ndinazo zonke izicelo zam ezindala phaya !! Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayibuyisela njani ipad kwi-icloud !!! Enkosi kakhulu ndiyathemba ukuba impendulo iyandinceda. Enkosi!!!!
Phendula ukuze uqaphele
Xa sibuyisela i-iPad, sinokukhetha ukubuyisela kwi-iCloud okanye kwi-iTunes backup. Sikhetha le siyifunayo kwaye ngokuthe ngqo siya kuba ne-iPad yogcino lwe-iCloud.
Uxolo kodwa ayikacaci kum, ukuba ungandicacisela ngcono, kufuneka ndiyenze kwikhompyuter nge-iTunes, ndibuyisele ikopi…. Kwaye apho ndinazo iikopi zokulondoloza endizenzileyo kodwa ayindinike ithuba lokukhetha i-iTunes okanye i-iCloud, indinika ukuba ndenze ikopi yogcino ukuba ndingayibuyisi, andazi ukuba ndiyazichaza na
Njengoko u-Ángel ekuxelele, ikopi ye-iCloud inokufunyanwa kuphela ngokubuyisela isixhobo kwaye xa uyiqwalasele, kwelinye lamanyathelo, akubuze ukuba uyafuna na ukubuyisa ikopi ye-iCloud. Ayikho enye indlela yokwenza.
Ithunyelw isuka kwi-iPhone
Ngo-Matshi 06, 05, ngo-2013: 19 emva kwemini, u "Disqus" wabhala:
Damn, ndiyaxolisa kodwa ndimtsha kwi-apile kwaye andazi ukuba ndenze njani kwaye ndiyoyika ukuyijija nangakumbi, ndifuna ii-newbies !! Haha enkosi xikos !!!
Ndidinga (inkcazo) yee-newbies !!
Masibone, Iviso, ndiza kuzichaza kangangoko ndinako:
Ukwenza isipele nge-iCloud ungayenza kuphela nge-iPad hayi kwi-iTunes.
Ukuza kuthi ga ngoku kulungile. Wenza ikopi kwi-iPad yakho kwaye uyigcine kwi-iCloud.
Uya kuba nakho ukubuyisela kuphela kwindawo yogcino egcinwe kwi-iCloud ukuba ubuyela kwi-iOS yangoku (i-iOS 6.1.3).
Xa ubuyisela kwi-iOS yangoku, ikunika ithuba lokuphinda ubuye kwakhona nge-iCloud okanye iTunes yogcino. Khetha iCloud, khetha eyokugqibela onayo kunye ne-voila, usetyenziso ebelunalo kugcino luya kukhutshelwa kwaye useto luya kuguqulwa.
Ndiyathemba ukuba ndiqondiwe
Umbhali weendaba ze-IPad
Kulungile, konke oku kuye kwacaca kum, kwaye ngoku ukubuyisela ipad kwaye undinike ithuba lokukopa kwi-icloud kufuneka ndiyenze kwikhompyuter okanye kwi-ipad, kwaye ukuba ivela kwi-ipad, injani yenziwe ??? Enkosi xikos ukuba iyandisebenzela le nto, niyamenywa nonke kubhiya !!! Yena yena
Ukubuyisela i-iPad kwenziwa nge iTunes. Iqonga likhuphela isoftware kwaye liyifaka kwithebhulethi yethu. Emva koko siza kubona into endikuxelele yona ngaphambili.
Kwi-Ipad 2 yam bendineJailbreak, ndiye ndayihlaziya kwi-IOS kodwa ngaphambi kokuba ndenze isipele, ikhompyuter ibuyiselwe ngokupheleleyo kwimvelaphi, ndiyazi ukuba iiapps, inkqubo, imixholo, njl njl. Ndingabuyisa iividiyo kunye neefoto endizigcinileyo, kwi-Icloud okanye kwi-Itunes ????, enkosi
Hlala ubukele, ndiza kulungiselela inqaku malunga nendlela yokubuyisela i-backups kwi-iTunes
Luis umbuzo, babuyisele i-iPad yam kwidesika ye-Apple kodwa khange bakhuphele i-iCloud backup, ndingenza njani ukuze ndilayishe ukhuphelo lwam lokugqibela kwi-iPad yam esele ibuyisiwe? Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho kwangaphambili?
Ikopi ye-iCloud inokubuyiselwa kuphela xa useta isixhobo. Oku kuthetha ukuba kufuneka ubuyisele isixhobo kwakhona kwaye xa uqala ukuyicwangcisa, bonisa ukuba ufuna ukubuyisela ikopi ye-iCloud.
Ikarari kaMarlon sitsho
Ndine-app yeKynotes kwaye kuyacaca ukuba ndiyayihlaziya kwaye ngoku ndihamba ndifuna ukufumana iintetho zam, andisazifumani, ndingenza ntoni ukubuyisa ezo fayile?
Phendula uMarlon Carias
Molo, kwimeko yam, ndihlaziye ios 7 version kunye neevidiyo zam ebendinazo kuapp, andikwazi ukuyidlala, indixelela ukuba iividiyo azifakwanga kugcino lwe-iclou kwaye zibalulekile kum. ukwenza ntoni ukuzifumana kwakhona?
Molo, kodwa kwimeko yam ibiwe iphone, ndifuna ukubona iifoto zam okanye ukubuyisa iifoto ezikwi-icloud, uyazi ukuba ungayenza njani? Enkosi
Molweni, ndinengxaki enkulu, ndilahlekelwe yi-iPhone 4 kwaye andisakwazi ukuthenga enye, ndinayo i-mini mini kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingazifaka iifoto ebendinazo kwi-iPhone kodwa andazi ungayenza njani, ungandixelela ukuba unako kwaye kanjani, enkosi
Phendula uLuz ma
I-iPad yam iyekisiwe ukusebenza, kwaye xa siye sayivula, ibingasenazo iifoto, iividiyo, amanqaku kunye neefayile. Kweneke ntoni? Ulahlekile ngonaphakade? Ngaba ukhona umntu onokundinceda.
Ukuba une-backup kwi-iTunes ungayibuyisela. Ukuba akunjalo ... Ndiyoyika kakhulu ukuba ulahlekile.
Ndinombuzo. Ndine-iPhone 4 kwaye ndinogcino, ukuba ndiyayicima, ngaba ndiyaphulukana nento endinayo ngoku kwi-iPad nakwi-iPhone 5? Oko kukuthi, ndingaphulukana nezinto endinazo kwezi zixhobo zombini ngoku okanye ndiyicime ukuze ndenze indawo, ndishiya yonke into endinayo ngoku?
elida zacharias sitsho
Umbuzo wam ngowokuba andina-backup, ndingayifumana imiyalezo ecinyiweyo ukuba ndiyayivula?
Kwaye ukuba kunjalo, ndingaphinda ndizicime endingahlaliyo kuzo?
Phendula uElida Zacarias
elo lifu yinkohliso yasimahla yeepesenti ezingama-99 zabantu
kukho abantu abaneefoto zobomi babo kwaye abasenako ukubabuyisa
Umzekelo: Ndine-iPhone okoko kwaphuma eyokuqala kwaye ngalo lonke ixesha ikopi yenziwe bayandixelela ukuba ibifihliwe
oko kuthetha ngeSpanish yam ecacileyo ukuba abasekho
umbuzo wam uphi "ii-backups" zam
bafanele ukuba ngabam
Kutheni ndibafuna efini ukuba andinakubabuyisa?
ilifu lentengiso elilahlekisayo
Ndiyakholelwa ukuba xa kugcinwa isipele, sasigcinwa
ke kum yinkohliso
okanye umntu ozakundicacisela yona, kuyabonakala ukuba mna «ndisisidenge»
kum eluncedo ilifu
Ukuba ndine-16g ye-iPhone kwaye ndineefoto ezingama-50 ngendinazo efini kwaye ukuba ndifuna ezinye ndizikhuphele ukuze ndingayigcwalisi i-iPhone
Ndithetha ukuba bonke balahlekile
Uvavanyo lwecala le-Otterbox Defender: ukhuseleko olupheleleyo lwe-iPhone 5